Xildhibaannada Baarlamaanka Oo Ka Dooday Hindise Sharciyeedka Guddiga Doorashooyinka – Radio Muqdisho
Xildhibaannada Baarlamaanka Oo Ka Dooday Hindise Sharciyeedka Guddiga Doorashooyinka
Xildhibaannada baarlamaaanka Somalia ayaa kulankii maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga dooday dhismaha guddiga madaxa banana ee doorashooyinka, waxaana xildhibaannada ay dood kulul ka yeesheen Akrinta sedexaas ee hindise sharciyeedka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka.
Akhrinta ka dib ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya waxay talooyin ka dhiibteen dhismaha guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka.iyo qabka loo dhisayo guddigaasi iyo shaqsiyaadka ka mid noqonaya guddigaasi.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka ee talooyinka dhiibtay ayaa sheegay in xildhibaannada ay dar-dar-geliyaan dooda hindise sharciyeedkan, si loo meel mariyo, isagoo Xildhibaanada ka codsaday in ay kala shaqeeyaan dhismaha guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka.waxa uuna sheegay in guddigaasi uu muhiim u yahay Dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in xubnaha baarlamaanka ay dulqaad muujiyaan, isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii loosoo gaba-gabeyn lahaa shaqooyinka u yaalla, sida hindise sharciyeedyada muhiimka ah.
Prof. Jawaari ayaa sheegay in ka hor shanta bisha Febraayo ee soo socota la meel-marinayo dhammaan hindise sharciyeedyada horyaalla baarlamaanka, xilligaa oo ay xildhibaannadu ay galayaan fasax xilliyeedkoodii caadiga ahaa.